Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
12/04/2017	260 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Waasuge iyo Warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. Dirir iyo labadii Duq halkaas ayey iska raaceen ayagoo Tagsi ku sida riyihii, waxayna gurigii tageen ayagoo aad loo raagsaday.
Waasuge iyo Warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo aan meel cag la dhigo lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Markay odayaashu soo dhax marayeen dumarkii ku hawlanaa cunto kariska, ayuu Waasuge inta isha la raacshay, niyadda iska yiri “Alley lehe waa dumar xalay oo dhan meseggo tumayey oo ku heesayey ayagoo leh:
“Makorwow dhagax waaye
Ma kacow dhulka waaye
Makaraan xirsi waaye
Muddulow aqal waaye
Mako naagaha waaye
Meerto waa hal la maalo
Mooy waxaa la yiraa
Isha meesha meesha madow
Mooye geed la jaroo muuno Muuno loo qoray waaye
Maqaarkii la aslaa
Massallaa la yiraa
Naagti maamul taqaan
Maakhiidaa la yiraa
Muslinkii la wacoo
Martiyaa la yiraa
Waa la meel mariyaa
Midigtaa la qabtaa
Wixii ay mar qabtaan
Marxabaa la yiraa.”
Intii cuntada la sugayey raggii waxaa dhex martay sheeko qaaya leh. Dooddu waxay ka furantay Warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa ayaa midkood su’aal dulun ah weydiiyey Waasuge iyo Warsame oo yiri “haddaad Ri’ xun darteed dhibaatadaas u marteen maxaad Warsame iyo Waasugow ka yeeli lahaydeen haddey ahaan lahayd Hal geel ah”. Warame inta si yastinu ku jirto u qoslay, oo asaga iyo Waasuge is dhugteen yiri:
“Ridu laba ragga ayey la wadaagtaa oo, waa Haar iyo Hareedka:
Laba naagaha ayey la wadaagtaa oo, waa Laab-jileeca iyo labada Naas:
Laba Geela ayey la wadaagtaa oo, waa Qatinka iyo Qarmaajeysiga:
Laba Lo’da ayey la wadaagtaa oo, waa Geesaha iyo Guduudka:
Laba fardaha ayey la wadaagtaa oo, waa Gurdanka iyo Gooha:
Midna way dheertahay oo, waa iyadoon laba jir gaarin ayey laba-
jir dad kaa shibbisaa”.
Odaygii reer magaalka oo nagtigiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii mar kale qaatay oo yiri “Warsamow haddaad ariga ku tilmaantay midka xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan Geel lahayn, sidaas daraaddeed way kuu furantahay inaad Riyaha amaantid, mar haddaadan aqoon u lahayn qiimaha Geela.” La soco Qeybta 19-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Wiil xaalad adag ku jiray oo maanta lagu badbaadiyay Muqdisho
Next: Maxaa saaka ka cusub magaalada Muqdisho? (warbixin)